Sending Email From ASP.NET | our notes for our youngers
Sending Email From ASP.NET
Filed under: ASP.NET, Other — Tags: .NET, ASP.NET, C#, programming, Sending Email — sevenlamp @ 4:55 PM
ကျွန်တော်ဗျာ ရုံးက frontend system ထဲမှာ email ပို့တဲ့ အပိုင်းလေး မရတော့လို့ ပြန်လုပ်လိုက်ရတာ တော်တော်လေးကို ပင်ပန်းသွားတယ်။ အချိန်လည်း ၂ရက် လောက်ကုန်သွားတယ်။ ( ရသွားလို့ တော်ပါသေးရဲ့ 😀 ) ညီတို့လည်း email sending အပိုင်းလေး ရေးဖို့လိုအပ်လာရင် ဒီပိုဒ့်လေးက အသုံးဝင်မှာပါ။
အရင်ဆုံး သိထားရမှာက မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတော့ ဒီ program ကို run လို့မရဘူးနော် 🙂
ကျွန်တော်တို့ email ပို့ဖို့အတွက် smtp server လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ domain hosting ယူထားတဲ့ ဆီကနေ smtp အတွက်ပါ တောင်းလို့ရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် email အကောင့်တစ်ခုလည်း ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာဗျာ ကျွန်တော့်မှာ www.sevenlamp.com ဆိုတဲ့ domain ၀ယ်ထားပြီဆိုရင်။ smtp server က smtp.sevenlamp.com ပေါ့။ port no လည်း သိရမယ်ဗျ။ များသောအားဖြင့်တော့ port no က 25, 464,587 စသည်ဖြင့် တစ်ခုခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ email account ကတော့ admin@sevenlamp.com ဆိုပြီး ရှိတယ်လို့ သဘောထားလိုက်ဗျာ။ (အဲ့ဒါတွေ မသိဘူးဆိုရင် domain hosting ယူတဲ့ company ကိုမေးလိုက်ပေါ့နော်) ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ program မှာ email ပို့တာ ရေးလို့ ရပါပြီ။
အရင်တုန်းကတော့ dotnetopenmail ဆိုတဲ့ third party component ကို သုံးကြတယ်ဗျ။ အခု နောက်ပိုင်းမှာတော့ System.Net.Mail ကိုပဲသုံးပါတယ်။ System.Web.Mail ဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်ဗျ။ အဲ့ဒီကောင်က .net frameword 1.1 မှာ သုံးခဲ့တာ။ System.Net.Mail ကတော့ v2.0 မှာမှ ပါတာ။ အခုကျွန်တော်တို့ သုံးမှာက System.Net.Mail ပါ။ သူ့ကိုသုံးဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့program ရဲ့ web.config file မှာ setting နည်းနည်းသွားထည့်ပေးရတယ်။
<network  host="smtp. sevenlamp.com"
userName=" admin@sevenlamp.com " />
ပြီးရင် UI မှာ ဒီလို design ချလိုက်ပါမယ်။
အခုနောက်ဆုံးတော့ btnSend ရဲ့ click event မှာ အခုလို့ ရေးလိုက်ပါမယ်။
msg.From = new System.Net.Mail.MailAddress(txtFrom.Text);
Coding က အရမ်းရှင်းလွန်းနေတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ထပ်ပြီး ရှင်းပြစရာ မလိုဘူးထင်ပါတယ်။ သိချင်တာရှိရင် ကောမန့်မှာ ထပ်ပြီးမေးပါခင်ဗျာ။
thanks for your good well.
Comment by Ma Nandar — December 21, 2009 @ 8:48 AM
yes, you can, but need to add one statement below.
Comment by sevenlamp — December 21, 2009 @ 11:34 AM
My Current Blog…..
Han shin thant on basic of C# (part 2)
Ye Min Sein on basic of C# (part 5)
Anonymous on basic of C# (part 5)
Oo Ko on Simple Book Store (Part 1…
Anonymous on Create your own Calendar from…
Charity4Human
ညီငယ်၊ ညီမငယ်တို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ သိသလောက် မျှဝေပေးချင်လို့ ဒီဘလော့ လေးကို အစပြုခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရေးတာတွေမှာ မှားတာတွေ တွေ့ခဲ့ရင် သိသူများ အနေနဲ့ ပြင်ပေး စေချင်ပါတယ်။ မရှင်းလင်း တာတွေ ရှိရင်လည်း ကောမန့်လေး တွေမှာ မေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အတက်နိုင်ဆုံး နားလည်အောင် ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ အပေါ်က meebo chat လေးမှာလဲ ပြောခဲ့လို့ရသလို၊ Chat Box(cbox) လေးမှာ အော်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဒီလင့်လေးကိုသွားလိုက်နော်။